चीन तेल ह्यूमिडिफायर, होटल ह्युमिडिफायर, कोठा ह्युमिडिफायर
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] व्यवसाय प्रकार:Manufacturer मुख्य बजार: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide निर्यातक:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report, BSCI विवरण:तेल ह्यूमिडिफायर,होटल ह्युमिडिफायर,कोठा ह्युमिडिफायर,सम्पूर्ण घर Humidifier,,
Home > उत्पादनहरू > होटल ह्युमिडिफायर
होटल ह्युमिडिफायर को उत्पाद कोटिहरु, हामी चीन, तेल ह्यूमिडिफायर , होटल ह्युमिडिफायर आपूर्तिकर्ताओं / कारखाना, कोठा ह्युमिडिफायर आर एन्ड डी को थोक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादनहरु र विनिर्माण देखि विशेषज्ञता प्राप्त गर्दै छन्, हामी एकदम सही पछि बिक्री सेवा र प्रौद्योगिकी समर्थन छ। तपाईंको सहयोगको लागि अगाडि हेर्नुहोस्!
स्टोरमा लक्षित रंगीन ग्लास ह्युमिडिफायर फिल्टर [उन्नत टेक्नोलोजी] हामी हावालाई अझ राम्ररी शुद्ध पार्नको लागि अल्ट्रासोनिक टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछौं र हावालाई राम्रोसँग न्युमिडिफाई गर्नका लागि ठूलो क्षेत्रमा सुगन्ध फैलाउन सकिन्छ। उही समयमा, अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजरले चल्दै आवाज निकाल्दैन, पानी आउटेजको स्वचालित शटडाउन...
मोडेल संख्या: 1822Q
चीन होटल ह्युमिडिफायर आपूर्तिकर्ता
होटल ह्युमिडिफायरले तपाइँको होटेलको कोठामा विशेष गरी जाडोमा ताजा वसन्त हावाको अनुभूति ल्याउँछ।
होटल अतिथिहरूले आशा गर्छन् कि तापक्रम र आर्द्रता उनीहरूको होटेलको कोठामा, पौंडी पोखरी क्षेत्रमा र स्पा एक स्वस्थ र आरामदायी तहमा हुनेछ। तातो मौसमको समयमा सापेक्ष आर्द्रताको सही स्तरले तपाईंको पाहुनाहरूको कल्याणलाई सुधार गर्दछ। And० र %०% RH बीचको सापेक्ष आर्द्रता भनेको सहज आराम भित्री वातावरण हो।
जाडो तताउने मौसममा सापेक्ष आर्द्रता प्रायः %०% भन्दा कम हुन्छ। कम आर्द्रता स्तरले तपाईंको मेहमानहरूको स्वास्थ्य र स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। आर्द्रता बिना, रोग र रोगको प्रति संवेदनशीलता पर्याप्त वृद्धि भएको छ।
कारण: भाइरस भएको एयरोसोल अधिक समय वायुयुक्त रहन्छ जब आद्रता कम हुन्छ, यसले प्रसारणको जोखिमलाई बढाउँदछ, र सुख्खा नाक, घाँटी र छालाको मतलब शरीरको प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता कम हुन्छ।
DITUO तेल Humidifier सामान्यतया इनडोर आर्द्रता, वा हावा मा चिसो को स्तर वृद्धि गर्न प्रयोग गरिन्छ। मुख्य रूपमा जाडो महिनाहरूमा प्रयोग गरिन्छ, इनडोर हीटिंग सिस्टम र चिसो तापक्रमको कारण कम आर्द्रता स्तर हुन्छ। यी ड्रायर महिनाहरूमा कोठाको humidifier को उपयोगले धेरै स्वास्थ्य लाभहरू लिन सक्दछ। DITUO सम्पूर्ण घर humidifier जाडो महीनहरुमा सुख्खा छाला र चाप्पड / सुख्खा ओठ घटाउन मद्दत गर्दछ।
सम्पूर्ण घर Humidifier